Etu esi elele ihe ịga nke ọma na-elekọta mmadụ | Martech Zone
Thetụle ihe ịga nke ọma nke mgbasa ozi mmekọrịta siri ike karịa ka ọtụtụ mmadụ kwenyere. Mgbasa mgbasa ozi nwere akụkụ atọ:
Direct tọghatara - nke a bụ ebe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-achọ ịlele nloghachi nke itinye ego. Otu njikọ na-eweta onye ọbịa ozugbo site na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ kesaa ya na ntụgharị. Agbanyeghị, ekwenyeghị m na ọ bụ ebe imirikiti ROI nọ.
Na-emetụta Mgbanwe - Inwe obodo dị mkpa nke na-ebu okwu gị dị oke egwu. Enwere m ike ịdee maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ndị ọrụ anyị na-ekerịta ọrụ ahụ, emesịa mmadụ n'ime netwọkụ nke ndị na-ege ntị pịa ma gbanwee. Ekwenyere m na nke a nwere mmetụta dị ukwuu karịa ntụgharị mgbanwe (ọ bụ ezie na enweghị m data iji kwado ya).
ọkụ - oge na-aga, iwulite ndị na-ege ntị na obodo maka mgbasa ozi mmekọrịta na-eme ka ị mata, ikike, na ntụkwasị obi. Ntụkwasị obi na-eduga n'ọdịdị ntụgharị dị elu. Mgbanwe ndị a nwere ike ọ gaghị abụ ihe ruru na mmelite mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ịkekọrịta. Agbanyeghị, eziokwu ahụ bụ na ọdịnaya gị dị na-akọrọ na ndị na-eso gị na-eto eto na-emetụta ma iru gị ma ikike ịtụgharị.
a ozi sitere na Salesforce na-arụ ọrụ pụtara ìhè nke ileba anya na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ niile. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị uru niile nke mgbasa ozi mmekọrịta ga-eme ka ndị ahịa nweta ihe dị ukwuu, mgbasa ozi mmekọrịta na-emetụtakwa ikike ịbuli ma jigide ndị ahịa gị.
Have nwere ọnụọgụ ole na ole ị ga-atụle mgbe ị na-achọpụta ihe ịga nke ọma mkpọsa gị. Mgbe a bịara n’inyocha data sitere na post, tweets na nkata gị, ịkwesịrị inwe ike ịkọwa data sitere na netwọkụ mgbasa ozi ọ bụla. Iji tụọ ihe ịga nke ọma na mmekọrịta gị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma mee ka saịtị mgbasa ozi ọ bụla dị mfe nyocha, tụlee iji ihe ndị ọzọ.
N’iburu n'uche ya, arụmọrụ mgbasa ozi na-abụkarị a edu egosi ihe ịga nke ọma nke usoro itinye aka gị. Nloghachi nke itinye ego ga - abawanye oge ka ị na - eto eto na ikike gị, yabụ na ị ga - emezigharị ebumnuche gị. Ihe omuma ihe omuma a bu oke oru nke inye uzo i gha acho site na uzo mgbasa ozi obula.
Anyị na-aga n'ihu na-eto eto mmetụta nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta anyị site na isoro ndị na-eme ihe ike, ịkọ na ịkekọrịta ọdịnaya dị egwu nke bara uru nye ndị na-ege anyị ntị, na ịkwalite ọdịnaya na onyinye anyị ozugbo. Ihe mgbaru ọsọ anyị abụghị ere, ọ bụ iji nye nnukwu uru na gị - ụmụazụ anyị - achọghị ịhapụ ma gaa n'ihu ịkekọrịta ihe anyị kesara.
Cheta - gbado anya na ọnọdụ nke usoro metrics gị, ọ bụghị isi data ozugbo! Uto nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta ihe ịga nke ọma gị.
Tags: omume kacha mmametric facebookotu esi tụọ mgbasa ozi mmekọrịtanjikọ metinsmart ihe mgbaru ọsọelekọta mmadụ mediaihe mgbaru ọsọ mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziigwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụigwe metrik twitter
Ọkt 8, 2015 na 12:44 PM
Akwa post! M na-ekwukarị ire ere na njirimara bụ 2 isi ihe na-elekọta mmadụ ROI. Ama infographic dị ịtụnanya n'agbanyeghị na ị ziri ezi.
Ọkt 13, 2015 na 4:37 AM
Ee mgbasa ozi ọha na eze dị ike ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya nke ọma mana ịlele ihe ịga nke ọma siri ike, ebe a n'isiokwu a / infographic kwuru n'ụzọ doro anya otu esi tụọ nsonaazụ mgbasa ozi mmekọrịta, ntụgharị mgbanwe dị ezigbo mkpa na anyị chọrọ ihe ịga nke ọma na ọrụ anyị.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkekọrịta ozi ahụ, lee anya.